Esi gbanwee nọmba na Telegram idebe akụkọ ihe mere eme anyị | Akụkọ akụrụngwa
Esi gbanwee nọmba na Telegram idebe akụkọ ihe mere eme anyị
Ọ bụghị ozi ọma na abụ m onye na-agbachitere ngwa ngwa ngwa ozi Telegram. Maka ndekọ ahụ, ọ bụghị n'ihi na ọ bụ megide onye ọ bụla, mana n'ihi na ọ na-enye m ọtụtụ ọrụ bara uru karịa ole na ole, n'ihi na enwere ole na ole nhọrọ WhatsApp. Iji malite, Telegram nwere ngwa maka desktọọpụ na mbadamba, ma iPad ma ọ bụ gam akporo. Akụkụ ikpeazụ a dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-abịakarị n'ụlọ na-enweghị obere batrị na ekwentị ma ọ bụ na-achọ ịgbapụ, ebe ọ bụ na-enye anyị ohere ịgbaso mkparịta ụka anyị site na mbadamba anyị nkasi obi mgbe anyị na-ekiri TV na ngwaọrụ anyị na-akwụ ụgwọ n'ime ụlọ.
Otu uru dị mkpa ọ nwere, ma e jiri ya tụnyere asọmpi ahụ, bụ inwe ike ịme nkata nzuzo na nzuzo ebe anyị nwere ike ịgbalite mkpochapụ ozi ndị anyị dere na oge anyị guzobere. Uru ọzọ anyị enweghị ike ichefu bụ mmekọrịta dị n'etiti ngwaọrụ nke mkparịta ụka anyị niile, vidiyo na onyonyo. WhatsAppbọchị WhatsApp na-ewute imepụta ngwa desktọọpụ, echere m na ọ ga-akaha, n'ihi na ndị ọrụ nwere mkpa ndị a ga-achọrịrị ụzọ ndị ọzọ dịka ọ dị m.
Nhọrọ ohuru nke ngwa a natara na mmelite ikpeazụ ya bu ihe puru ime -akpali mkparịta ụka anyị niile na nọmba ekwentị ọzọ na-enweghị adịkwa ọ bụla data. Ọrụ nke ọrụ a bụ otu ihe ahụ arụ ọrụ ahụ mgbe emekọtara data n'etiti ngwaọrụ, yabụ na ọ bụghị usoro mgbagwoju anya.
Change nọmba idebe anyị akụkọ ihe mere eme
Mbụ anyị na-aga Ntọala ngalaba nke ngwa.
Ọzọ anyị na-aga Nọmba ekwentị. Lee Telegram ga-agwa anyị usoro nke ọ ga - ebu ma pịa Change nọmba. Telegram ga-egosi ozi na-esonụ: Ndị kọntaktị Telegram gị niile ga-etinye nọmba gị na akwụkwọ ịkpọtụrụ ha, ọ bụrụhaala na ha nwere nọmba ochie gị ma ị gbochighị ya na Telegram. Nke ahụ bụ, kọntaktị gị ga-enweta nọmba ekwentị ọhụrụ gị, na-echekwa anyị ọrụ na-agwụ ike nke ịga otu n'otu na-ekwupụta mgbanwe ahụ. Pịa na mma.
Ugbu a, anyị ga- tinye nọmba ekwentị anyị ebe anyị ga-enweta koodu nkwenye. Ozugbo anatara gị, ngwa ahụ ga-achọpụta ya wee bido ibudata ọdịnaya ahụ site na nọmba ekwentị ochie anyị na nke ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbanwee nọmba na Telegram idebe akụkọ ihe mere eme anyị
Agbanwela m nọmba m na nke enyi, ma ugbu a, anyị achịkọtala nnụnụ ahụ ma nwee kọntaktị nke 2, kọntaktị anaghị akwụsị ito, ọnụọgụ m chere na anyị nwere na-agakọtaghị aha ahụ na WhatsApp, wdg ... Enwere m ike ime ịgbanwe ihe m mere ??
Mgbe ị na-eme usoro a, Telegram na-ahụ maka i copomi atụmatụ niile site na otu nọmba gaa na ọzọ. Ihe ị ga - eme bụ ịgbanwe nọmba ekwentị ọzọ site na ọnụ ebe ị mere ya na nọmba ekwentị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ abụọ ejikọtara na otu nọmba telegram ahụ, ngwaọrụ abụọ ahụ ga-enweta otu ozi ahụ, ebe ọ bụ ọrụ multiplatform.
Ọ bụrụ na ị rụnyekwara ngwa ahụ na iPad ma ọ bụ na kọmputa, ngwaọrụ ndị a ga-enwetakwa ozi ahụ.
Ndewo, enwere m olile anya na mmadụ nwere ike ịza !!! was E zuru ekwentị m ma ka nwere akaụntụ ahụ na PC m .. M jisiri ike pụọ na sel ahụ, mana mgbe m gbalịrị ịgbanwe nọmba ekwentị, ọ gaghị ekwe omume… PC m nwere sistemụ arụmọrụ Linux m echiche ọ bụla ???… gratzie111
Ndewo, ndo, ị nwere ike idozi ya? ?
Mirian Kuwait dijo
Ndewo, ị nwere ike inyere m aka, anọ m na mba ọzọ ruo nwa oge, alaghachiri m mba m ma debanye telegram m na nọmba ahụ mgbe m na-eweghachi ekwentị m, ehichapụ ngwa niile mgbe m budatara ha ọzọ wee nwetaghachi ha, I chọrọ ịmegharị ha na nọmba mba ọzọ maka na achọghị m ida akụkọ ihe mere eme m, naanị na ọ gaghị ekwe omume n'ihi na ọ jụrụ m maka koodu nkwenye ahụ, biko mmadụ nwere ike ịgwa m otu m ga-esi nwetaghachi akụkọ ihe mere eme m na nọmba ochie?
Daalụ nke ukwuu maka itinye uche gị! Ana m eche obi ụtọ
Zaghachi Mirian Kuwata
Loraine eze dijo
Ndewo ọma m nwere olileanya na ị nwere ike inyere m aka. Achọrọ m iji nwetaghachi akaụntụ telegram m na-ejighị mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, mana enwekwaghị m akara ekwentị m ochie, enwere ike iweghachite nkata m na kọntaktị m? Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara biko nyere aka !!
Zaghachi Loraine castro
N'ime nke m dijo
Ndewo, achọrọ m ịma, ọ bụrụ na m gbanwee nọmba ekwentị m na telegram, nọmba ndị gara aga ka ga-enwe ike ịnweta kọntaktị m na mkparịta ụka m?
Ndewo onye ọ bụla. Achọrọ m ịgbanwe nọmba ekwentị n'ihi na anaghị m eji ya ọzọ na Telegram na-agwa m: «Maka nchekwa nchekwa, ịnweghị ike ịgbanwe nọmba ekwentị site na ngwaọrụ ejikọrọ na nso nso a. Biko jiri njikọ ochie ma ọ bụ chere awa ole na ole ». Ya mere, olee otu m ga-esi gbanwee nọmba? Agbalịrịla m ọtụtụ oge na ihe ọ bụla. M nwere nnọkọ weebụ malitere na nọmba ochie ọ gaghị ekwe ka m gbanwee ya site na ebe ahụ ... Daalụ
Ndewo, ị mere ya.Gịnị mere m ji nwee nsogbu ahụ!?
5 ngwaọrụ idozi rụrụ arụ AVI faịlụ site na Windows
CMD: Iwu 5 dị mkpa na Windows na ị maghị